Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo aflagaado u geestay diinta islaamka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo aflagaado u geestay diinta islaamka
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa diinta Islaamka ku qeexay “diin adduunka oo dhan ay dhibaato ka taagan tahay,” isaga oo shaaca ka qaaday qorshe lagula dagaalamyo wax uu ugu yeeray “xagjirnimada Islaamka” ee gudaha France.
Macron ayaa sheegay in diinta Islaamka ay xasarad ku sugan tahay, sababtuna ay tahay mowqifyo xagjir ah oo kasii daraya.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in dowladda ay bisha December soo bandhigi doonto sharci looga gol leeyahay in sare loo qaado calmaaniyadda Faransiiska, kana dhan ah “gooni u goosadka Islaamiga ah.”
Waxa uu sheegay in dowladda ay bisha December soo bandhigi doonto sharci lagu xoojinayo sharcigii laga soo saaray France 1905-tii, kaasi oo kala saaray diinta iyio dowladda.
Tallaabooyinkan, ayuu Macron yiri in looga gol leeyahay in wax looga qabto dhibaatada xagjirnimada Islaamka ee kusii kordheysa France, loona horumariyo “awoodda aan u leenahay inaan wada noolaano.”
“Calmaaniyadda waa waxa isku haya midowga Faransiiska,” ayuu yiri.
Sharcigan, ayuu sheegay, inuu dadka u ogolaanayo inay doortaan diinta ay doonayaan, hase yeeshee uu mamnuucayo in iskuulada iyo goobaha dadweynaha lagu muujiyo diinta.
Muslimiin badan waxay cabasho ka muujiyeen in la takoorayo islamarkaana la dhibaateynayo, taasi oo horseeday inay bulshada ka soocmaan, noqdaana bulsho gooni u nool oo badankoodna sabool ah.
Previous articleTrump in hospital; campaign chief positive for COVID-19 – Live
Next articleAgaasimaha Hay`adda Caafimaadka WHO oo Trum u rajeeyay caafimaad